Shina: Fihetseham-po Manoloana ny Tifitra Variraraka Nahafaty Olona Maro tao Virginia Tech · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2017 18:46 GMT
(Marihana fa tamin'ny 19 avrily 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Ho setrin'ny tifitra variraraka nahafaty olona maro tao Virginia Tech tamin'ity herinandro ity sy ny hamehana, rehefa nahita ny endrika amam-bikan'ilay mpitifitra nolazaina haingana ho Shinoa, dia maro tamin'ireo bilaogera lasa Shinoa ho azy no tsy nino, ny sasany nampihazakazaka vaovao diso hampandroso kokoa ny teti-panorona politikany, saingy ny ankamaroany kosa naneho fiaraha-miory tamin'ny niharam-boina, tamin'ireo mpiara-mianatra aminy, tamin'ireo namana sy tapaka. Avy eo misy ihany koa ny fijery tahaka ny navoakan'ny mpanao gazety sady bilaogera Ten Years of Chopping Timber, ho setrin'ny voina roa hitan'ny besinimaro ao Shina, ‘Eo am-piandrasana ny atero ka alaon'i Bush’
Eo am-piandrasana ny atero ka alaon'i Bush
Tamin'ny fandrenesana ny vaovaon'ny tifitra variraraka nahafaty mpianatra 33 (ao anatin'izany ilay mpitifitra) tao Virginia Tech tao Amerika, naneho avy hatrany ny fiaraha-miory ny mpitondra antsika eto amin'ny firenena ; hery mamirapiratra tokoa izany, firenen'ny [fahalalam-pomba]. Saika mifanandrify amin'io fotoana nisian'ny tifitra variraraka io, nisy voina roa nahazo ny taniben'i Shina: loza iray nitranga tao amin'ny toeram-pitrandrahana tao amin'ny firaisan'i Baofeng tao amin'ny faritanin'i Henan nanjavonan'olona miisa 33; sy iray hafa tao amin'ny fiaramilina fandrarahana vy-tsy mandranoka tao amin'ny Qinghe Special Steel Corporation tao an-tanandehiben'i Tieling, faritanin'i Liaoning niala tamin'ny lalamby falehany ka niteraka fahafatesan'olona miisa 32. Mifanakaiky tokoa ny isan'ny niharam-boina ary saika nifanandrify ny fotoana nitrangan'izanyy, noho izany raha mipetraka ny fitsipika fahalalam-pomban'ny atero ka alao, dia tokony naneho fankaherezana ho an'ny governemantantsika i Bush.
Rehefa hita moa fa i Amerika no hery goavana tokana, sady ilay hery goavana donto, rehefa naharay ny hafatra fiaraha-miory avy amin'ny sefon'ny firenentsika, dia mba tokony nanatitra ny antso fanehoana fankaherezana. Hatramin'izao dia mbola tsy nisy ny tatitra avy amin'ny fampitam-baovao nandrenesana an'i Bush nandefa hafatra fankaherezana, ary manahy aho fa tsy ho tonga velivelyy izany hafatra fiaraha-miory izany.
Amin'ny topimaso voalohany raha manao ny fampitahana, dia afaka mieritreritra ianao fa dombo ihanyy i Bush, tsy fantany izay ataony, hany ka na ny vahoakany sy ny fianakaviany aza dia mahalala fa tsy mahalala fomba izy amin'ny tsy fahaizana mamaly fahalalam-pomba. Fa alohan'ny anozonanao an'i Bush, dia tokony ho hitanao ny fihetsiky ny governemanta roa manoloana ny fahafatesana mampalahelo mahazo ny olom-pireneny tsirairay avy..
Ao Etazonia natao misaona nandritra ny herinandro nyy sainam-pirenena, ary tonga namangy ny campus nisian'ny famonoan'olona maro haneho ny fiarahany miory Rtoa Bush tenany. Raha manao ny raharaha toy izany ny firenentsika, dia hitako eto fa tsy ho tonga eny amin'ny faratampony amin'ny andry mihitsy ny saina ao amin'ny kianjan'i Tiananmen, ary tsy hanam-potoana hamela ny firenena noho ny fanaovana famangiana mihitsy ny lehibentsika eto amin'ny firenena. Raha nitranga teto amin'ny firenentsika ireo voina anankiroa ireo, ankoatra ny havany, toa tsy betsaka no naneho alahelo azy ireo ; nefa ny governemanta a amerikana namadika ny famonoan'olona ho fisaonam-pirenena.
Raha maneho ny fiaraha-miory noho ny fisian'ny voina ny filoham-panjakana, dia tsy misy lanjany loatra n isan'ny olona maty, fa ny manandanja dia fanehoana firaisankina avy amin'ny governemantan'ny firenena. Tsy miankina amin'ny halehiben'ilay firenena, na ny heriny, na ny fahazoany vola, tsy miankina amin'ny fananan'ny olona ihany ny fihetsika manoloana ny aina, fa miankina amin'ny fihetsiky ny sefo manoloana ny aina ihany koa. Raha zara raha mahita ny toerana handevenana ny fatin'ny andevo na biby iray ny fianakaviana manankarena fatratra iray, moa va hisy ny hanahiran-tena hisaona ? Moa va tsy fantatry ry zareo fa mitovy amin'ny maneso ny olona ny manao ezaka be hisaonana olona? Raha misy fianakaviana faran'izay mahantra iray manatona any amin'ny fisaonan'ny havany ao anaty fanajana, dia ho avy haneho fanajana ny olona avy amin'ny vazantany efatra. Tsy fanehoana fanajana ny tsy fandehanana any.
Noho izany, raha tsy ho tonga mihitsy ny fiaraha-miory avy amin'i Bush, tsy manana olona hotsiniana afa-tsy ny tenany izy.